အလယ်အလတ်ပြည်နယ် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘုရားသခင် ဆွစ်ဇာလန်ဘုရားကျောင်း
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ် > အဆိုပါအလယ်အလတ်ပြည်နယ်
အလယ်အလတ်ပြည်နယ်သည် လူသေများ ရှင်ပြန်ထမြောက်သည့်တိုင်အောင် တည်ရှိနေသည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာကျမ်းဂန်များ၏အနက်ကိုမူတည်၍ ခရစ်ယာန်များသည် ဤအလယ်အလတ်အခြေအနေ၏သဘောသဘာဝကို မတူညီသောအမြင်များရှိသည်။ အချို့သော ကျမ်းပိုဒ်များက သေလွန်သူများသည် ဤအခြေအနေကို အသိစိတ်ဖြင့် တွေ့ကြုံခံစားရပြီး အခြားသူတို့၏ အသိစိတ် ပျက်သွားသည်ဟု ညွှန်ပြသည်။ အမြင်နှစ်ခုစလုံးကို လေးစားသင့်သည်ဟု ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်းက ယုံကြည်သည်။ (ဟေရှာယ ၁4,9စာ-၁၀; ယေဇကျေလ ၃2,21; လုကာ ၂6,19-31; ၂၈.၃3,43; 2. ကောရိန္သု 5,1-8; ဖိလိပ္ပိ 1,21စာ-၂၈; epiphany 6,9စာ-၁၁; ဆာလံ 6,6; 88,11-13; ၂၈.၃5,17; တရားဟောဆရာ 3,19နှစ်ဆယ် 9,5.၁၀; ဟေရှာယ ၃8,18; ယော 11,11နှစ်ဆယ် 1. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,13-14) ။
လူတစ် ဦး သည်သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြားသတိလစ်သည်ဖြစ်စေသတိရှိခြင်းရှိ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့မသိဘူး ခရစ်ယာန်သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်လူအများစု၏ထင်မြင်ယူဆချက်မှာလူသေသည်နောက်ဘုရားသခင်နှင့်အတူသတိရှိခြင်း (သို့) သတိရှိရှိအပြစ်ပေးခြင်းခံရသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ လူနည်းစု၏အမြင်ကို“ ဝိညာဉ်ရေးအိပ်စက်ခြင်း” ဟုလူသိများသည်။
ဒေသနာကျမ်းနှင့် ဆာလံကျမ်းများကဲ့သို့သော သေခြင်းအကြောင်းဖော်ပြရန် “အိပ်ပျော်ခြင်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် ရင်းနှီးကြသည်။ ဤအခန်းငယ်များကို ဖြစ်ရပ်ဆန်းဗေဒရှုထောင့်မှ ရေးသားထားပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် လူသေကောင်၏ ရုပ်ဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်သည် အိပ်ပျော်နေပုံရသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၌ အိပ်ခြင်းသည် ရုပ်ခန္ဓာ၏ အသွင်အပြင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သေခြင်း၏ ရုပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မဿဲ ၂ ကဲ့သို့ အခန်းငယ်များကို ဖတ်လျှင်7,5၂ ယော 11,11 နှင့် တမန်တော် ၁3,36 စာဖတ်ခြင်းသည် သေခြင်းတရားသည် "အိပ်စက်ခြင်း" နှင့် စာသားအရ ညီမျှသည်ဟု ထင်ရသည် - စာရေးသူတို့သည် သေခြင်းနှင့် အိပ်ခြင်းကြားတွင် အရေးကြီးသော ခြားနားချက်ရှိကြောင်း စာရေးသူ သိရှိထားသော်လည်း၊
သို့သော် သေပြီးနောက် အသိစိတ် ညွှန်ပြသည့် ကျမ်းချက်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ အလေးထားသင့်သည်။ ၌ 2. ကောရိန္သု 5,1-၁၀ ရှင်ပေါလုသည် အခန်းငယ် ၄ တွင် “အဝတ်မဲ့” ဟူသော စကားလုံးများနှင့် အခန်းငယ် ၈ တွင် “သခင်နှင့်အတူရှိတော်မမူ” ဟူသော အလယ်အလတ်အခြေအနေကို ရည်ညွှန်းပုံရသည်။ ဖိလိပ္ပိ၌ 1,21၂၃ ခရစ်ယာန်များသည် “ခရစ်တော်နှင့်အတူရှိရန်” လောကကိုစွန့်၍ သေခြင်းသည် “အကျိုး” ဖြစ်သည်ဟု ပေါလုဆိုသည်။ ဒါက သတိလစ်သွားသလိုမျိုး မခံစားရပါဘူး။ ဒါကိုလည်း လုကာ ၂ မှာ တွေ့ရတယ်။2,43လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ရှိ သူခိုးအား သခင်ယေရှုက “ယနေ့ သင်သည် ငါနှင့်အတူ ပရဒိသုဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ဂရိဘာသာစကားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် မှန်ကန်စွာ ဘာသာပြန်ဆိုထားသည်။
နောက်ဆုံးတွင်အလယ်အလတ်အယူဝါဒသည်ဘုရားသခင်မှကျွန်ုပ်တို့အားသမ္မာကျမ်းစာနှင့်တိကျမှန်ကန်စွာဖော်ပြရန်မရွေးချယ်ပါ။ ရှင်းပြနိုင်လျှင်ပင်၎င်းသည်လူ့နားလည်နိုင်စွမ်းထက် ကျော်လွန်၍ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသွန်သင်ချက်သည်ခရစ်ယာန်များအငြင်းပွား။ ခွဲဝေသင့်သည့်မေးခွန်းမဟုတ်ပါ။ ဓမ္မပညာဆိုင်ရာအဘိဓာန်အဘိဓာန်အရ "အလယ်အလတ်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောထင်မြင်ချက်များသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှပေါ်ထွက်လာသောသို့မဟုတ်အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းကိုမျှော်လင့်ကြောင်းသေချာစေရန်ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်ပါ။ "
အကယ်၍ သူသေပြီးတဲ့နောက်သူတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်အပြည့်အဝနားမလည်။ “ ယေရှုပြန်မလာမှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်သင့်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတိလစ်မိလျှင်၊ တိုင်ကြားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသေသောနောက်လာမည့်သတိထားရမည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိလိမ့်မည်။